ခင်ပွန်းသည်ကို တားရင်း အကယ်ဒမီဂယက် အတွက် စကားဆိုလိုက်တဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် - Cele GabarCele Gabar
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် တေးသီချင်းတွေကိုလည်း အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုနိုင်တဲ့ တေးသံရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ယခုနှစ် အကယ်ဒမီမှာလည်း သူရဲ့ ပြောင်မြောက် လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် “နောင်တွင်ဥဒါန်းတွင်စေသတည်း” ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကယ်ဒမီ ရရှိနိုင်တယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံရသူတစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလောမှာ ဝေဖန်မှုတွေ နဲ့ ပွဲဆူခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီအတွက် မခိုင်ကြီးတစ်ယောက် ပရိသတ်တွေထိရှသွားစေမယ့် စကားတစ်ခုကို ဆိုလိုက်ပါတယ်။
(၂၀၁၈) အကယ်ဒမီဟာ ရုပ်ရှင်လောက နဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပါ ပွဲဆူစေခဲ့တာပါ မခိုင်ကြီးရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ “ကိုအောင်မင်းထွန်း က တုတ်ဖို့ စာတွေ စီ စီ နေလို့ တားနေရတယ်လေ … တကယ်တန်းကျ တော့ ကိုယ့်ရင်ထဲ မှာ ပြောနေမိတာလဲ …every sector မှာ generation gaps တွေ များနေပြီ …. လို့” ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးကြီး စိုးမြတ်သူဇာက တော့ မှတ်ချက်ကနေ” အမ ကလဲ ပြောပါစေ ” ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပေးထားလေရဲ့ ။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရော မခိုင်ကြီးရဲ့ စကားအပေါ် မှတ်ချက်ကနေ တစ်ခုခု ပြောခဲ့ကြပါနော် ။
ခငျပှနျးသညျကို တားရငျး အကယျဒမီဂယကျ အတှကျ စကားဆိုလိုကျတဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ
ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျကတော့ အနုပညာလောကမှာ လြှမျးလြှမျးတောကျအောငျမွငျနတေဲ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ တေးသီခငျြးတှကေိုလညျး အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ သီဆိုနိုငျတဲ့ တေးသံရှငျတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျယခုနှဈ အကယျဒမီမှာလညျး သူရဲ့ ပွောငျမွောကျ လှတဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှကွေောငျ့ “နောငျတှငျဥဒါနျးတှငျစသေတညျး” ဇာတျကားကွီးနဲ့ အကယျဒမီ ရရှိနိုငျတယျလို့ ထငျကွေးပေးခံရသူတဈယောကျပါ။ လတျတလောမှာ ဝဖေနျမှုတှေ နဲ့ ပှဲဆူခဲ့တဲ့ အကယျဒမီအတှကျ မခိုငျကွီးတဈယောကျ ပရိသတျတှထေိရှသှားစမေယျ့ စကားတဈခုကို ဆိုလိုကျပါတယျ။
(၂၀၁၈) အကယျဒမီဟာ ရုပျရှငျလောက နဲ့ ပရိသတျတှကေို ပါ ပှဲဆူစခေဲ့တာပါ မခိုငျကွီးရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ “ကိုအောငျမငျးထှနျး က တုတျဖို့ စာတှေ စီ စီ နလေို့ တားနရေတယျလေ … တကယျတနျးကြ တော့ ကိုယျ့ရငျထဲ မှာ ပွောနမေိတာလဲ …every sector မှာ generation gaps တှေ မြားနပွေီ …. လို့” ဆိုပွီးရေးသားထားပါတယျ။ ပရိသတျအခဈြတျော မငျးသမီးကွီး စိုးမွတျသူဇာက တော့ မှတျခကျြကနေ” အမ ကလဲ ပွောပါစေ ” ဆိုပွီး မှတျခကျြပေးထားလရေဲ့ ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရော မခိုငျကွီးရဲ့ စကားအပျေါ မှတျခကျြကနေ တဈခုခု ပွောခဲ့ကွပါနျော ။
Next Next post: ဒါရိုက်တာဝိုင်းကြောင့် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပရိသတ်မဝင်ခဲ့တဲ့ လှပ်၍လွင့်သော ရုပ်ရှင်
Line Walker (2) လို ဂယက်ထခဲ့တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကား
Published: February 20, 20193:59 pm Updated: 4:07 pm
ဇနီးဖြစ်သူ ဟန်ဂါအင် မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ “2018 MBC Drama Awards” ဆုပေးပွဲမှာ ယွန်ဂျန်ဟွန် ပြော
Published: December 31, 201812:27 pm
ရေခဲတောင် ဇာတ်ကားမှာဒါရိုက်တာ ချွတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် ချွတ်ပြသွားပါမယ်လို့ ဆိုတဲ့သင်ဇာဝင့်ကျော်
Published: February 15, 201912:12 pm
သရုပ်ပျက် LGBT တွေကို စကားချိုချိုလေးနဲ့ ဆုံးမလိုက်တဲ့ အဆိုတော်မလေး ထိုက်ထိုက်
Published: January 28, 201911:54 am
အိန္ဒြာကျော်ဇင် Pride Of Myanmar award ကိုရရှိခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်း
Published: February 3, 20197:11 pm
ပရိသတ်အလိုကျ သင်ဇာကောင်းကျော်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ရတဲ့ ဦးကောင်းကျော်
Published: December 29, 201811:17 am
ကိုယ်ရံတော်တွေနဲ့အမိုက်စားဂေါ်နေတဲ့ စူးရှထက်ရဲ့ Tik tok ဗီဒီယို
Published: February 22, 20192:47 pm